मार्केटरहायर: कहाँ एक भाँडा फ्रिल्यान्स मार्केटर भाडामा लिनुहोस् Martech Zone
यो वर्ष धेरै संस्थाका लागि चुनौतीपूर्ण भएको थियो। यो किस्साको रूपमा रहेको भए पनि, तीन प्रवृतिहरू जुन मैले अवलोकन गरिरहेको छु:
डिजिटल परिवर्तन - बाह्य ग्राहक अनुभवमा पहिलेको फोकस आन्तरिक स्वचालन र ठूलो स organizations्गठनको साथ एकीकरणमा सरेको छ किनकि उनीहरूले स्टाफ र खर्च कम गर्छन्।
रिमोट टोली - महामारीको बखत घरबाट काम गर्ने परिवर्तनको कारण, कम्पनीहरूले घरबाट काम गर्ने सम्बन्धमा आफ्नो विचारधारा बदलेका छन् र टाढाको टिम वर्कमा बढी खुला छन्।
स्वतन्त्र ठेकेदार - ठूला कम्पनीहरूले उनीहरूको पूर्ण-समय स्टाफलाई अनुबन्ध र अफशोर मार्केटिंग पेशेवरहरूको साथ बढाइरहेका छन्। "भाँडाका लागि CMO" बाट ग्राफिक डिजाइनरहरू सम्म ... ठेकेदारहरू हरेक कम्पनीको एक महत्त्वपूर्ण अंश बनिरहेका छन्।
मार्केटिंग फ्रीलांसरहरू कहाँ भेट्टाउने
जबकि त्यहाँ प्रतिभा खोज्नको लागि ठूलो संख्यामा अनलाइन साइटहरू छन्, त्यहाँ केहि संसाधनहरू छन् जुन दुबैलाई अनुगमित गर्दै हुनुहुन्छ प्रतिभाको परीक्षण गर्न र प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ। साथै, धेरै जसो सेवाहरूलाई विस्तृत भर्ती र सम्झौता समयरेखा र महत्वपूर्ण असफलता दरहरूको बावजुद समाप्ति शुल्क आवश्यक पर्दछ।
मार्केटरहायर प्रि-वेटेड टेलेन्ट भर्ती गर्नका लागि सेवा हो त्यसैले तपाईंको संगठनले एक हप्ता भन्दा कममा तपाईंको टीममा एक प्रमाणित मार्केटर थप्न सक्दछ! तिनीहरूले कम भाडा शुल्क, कुनै टर्मिनेसन शुल्क, र प्रति घण्टा, आंशिक-समय, वा पूर्ण-समय संसाधनहरू भाडामा लिनको लागि एकदम कम असफलता प्रस्ताव गर्दछ।
कसरी MarketerHire मार्केटर्स Vates
मार्केटरहायरसँग कडा फ्रीलांसर स्क्रिनि has प्रक्रिया छ र आफै मार्केटरहरू हुन् - त्यसैले तिनीहरू उत्कटता र ड्राइभका साथ प्रमाणित विज्ञहरूको खोजी गर्दछन्। सयौं मार्केटरहरू प्रत्येक महिना लागू हुन्छन्, तर मार्केटरहायर केवल%% भन्दा कम राख्छ। तिनीहरू:
शीर्ष प्रदर्शनकर्ताहरू भर्ती गर्नुहोस् - तिनीहरू फेसबुक समूहहरू, फोरमहरू, र LinkedIn प्रतिभा पहिचान र प्रमाणित गर्न अनुगमन।
In-Depth कौशल समीक्षा - तिनीहरू व्यावसायिक अनुभव, ग्राहक प्रतिक्रिया, र काम नमूनाहरूको साथै एक सीप-विशिष्ट मूल्यांकन समीक्षा गर्दछ।
भिडियो साक्षात्कार - संचार कौशल, आलोचनात्मक सोच, र व्यावसायिकता मूल्यांकन गर्न।
परीक्षण परियोजनाहरु - स्वीकृति पछि, उम्मेदवारहरूलाई क्षमता, पूर्णता, व्यावसायिकता, र ईमानदारी प्रदर्शन गर्न वास्तविक विश्व परिदृश्यको साथ एक टेस्ट प्रोजेक्ट तोकिन्छ।
जारी उत्कृष्टता - प्रदर्शन प्रत्येक2हप्ता ग्राहकहरु संग समीक्षा गरिन्छ गुणवत्ता सेवा र संचार सुनिश्चित गर्न।
तपाइँ सम्पूर्ण प्रक्रिया मार्फत मार्केटिंग म्यानेजरसँग साझेदारी गर्नुहुनेछ। तिनीहरूले तपाईं संग तपाईंको परियोजना छलफल, तपाईं के चाहानुहुन्छ निर्धारण गर्न मद्दत, र एक मार्केटर तपाईं हात मिलाउनेछ। तपाईंको भाँडा सुरु भएपछि, तीनिहरूले हाम्रा उच्च मापदण्डहरू पूरा भइरहेछन् भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न जाँच गर्नेछन्।
को लागी प्रक्रिया मार्केटरहायर द्रुत र निर्बाध छ:
तपाईंको प्रोजेक्ट वर्णन गर्नुहोस् - मार्केटरहायरलाई तपाईंको प्रोजेक्टको बारेमा बताउनुहोस्। के तपाईं एकल च्यानल विशेषज्ञ खोज्दै हुनुहुन्छ वा बहु-च्यानल टोली निर्माण गर्न? मार्केटरहायरले तपाईंको परियोजनाको बारेमा बढि जान्न र तपाईंको वास्तविक आवश्यकताहरूको राम्रो समझ प्राप्त गर्न तपाईंसँग कल शेड्यूल गर्नेछ।
तपाइँको उत्तम मार्केटरलाई भेट्नुहोस् - एक पटक तपाईंको मार्केटिंग म्यानेजरले तपाईंको प्रोजेक्ट बुझ्दछ भने, तिनीहरूले एक ठूलो म्याच फेला पार्न उनीहरूको मार्केटर्सको नेटवर्क खोजी गर्नेछन्। उनीहरूलाई भन्नुहोस् कि तपाईंलाई सिफारिश गरिएको मार्केटर मनपर्दछ र हामी एउटा परिचय कलको तालिका बनाउँदछौं ताकि तपाईं तिनीहरूलाई भेट्न र प्रोजेक्ट समीक्षा गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं स्वतन्त्रकर्ताको बारेमा अनिश्चित हुनुहुन्छ भने, तिनीहरूले अधिक परिचय सेटअप गर्नेछन्।
तपाईंको प्रोजेक्ट किक-अफ - तपाईले आफ्नो मार्केटरलाई स्वीकृति पाउने बित्तिकै उनीहरू प्रोजेक्टबाट लात लिन र तपाईंको टोलीमा एकीकृत हुन तयार हुनेछन्। तपाईंको व्यवस्थापक प्रत्येक दुई हप्तामा चेक-इन गर्नेछ। यदि कुनै कारणको लागि यदि तपाइँ तपाइँको बजारसँग खुशी हुनुहुन्न भने, तिनीहरूले तपाइँलाई नयाँसँग मिलाउनेछन्।
कुनै काम पोष्टिंग छैन, कुनै अन्तर्वार्ता छैन, कुनै टाउको दुखाइदिनु ... प्रयास गर्नुहोस् मार्केटरहायर आज उपलब्ध भुमिकामा अमेजन मार्केटर, ब्रान्ड मार्केटर, चीफ मार्केटिंग अफिसर्स, कन्टेन्ट मार्केटर, ईमेल मार्केटर्स, ग्रोथ मार्केटर, एसईओ मार्केटर, सशुल्क खोजी बजार, सामाजिक मिडिया मार्केटर, र सशुल्क सोशल मिडिया मार्केटरहरू सामेल छन्।
मार्केटरहरू भाडामा लिनुहोस् फ्रीलांसरको रूपमा लागू गर्नुहोस्
प्रकटीकरण: म मेरो प्रयोग गर्दैछु मार्केटरहायर यस लेखमा सम्बद्ध लिंक।
टैग: स्वतन्त्र बजारmarketerhireबजारमार्केटिंग फ्रीलांसरहरूभुक्तान गरिएको खोज बजारहरूसशुल्क सामाजिक मिडिया बजारहरूप्रति क्लिक बजारहरु तिर्नुहोस्सामाजिक मिडिया विज्ञापनदाताहरुसामाजिक मीडिया बजार